Saffron - Inonhuwira inodhura zvikuru munyika yose uye panguva imwe chete mhinduro
Kuporesa masimba e safoni - nhema uye nhoroondo
Saffron inozivikanwa saiye mambo wemiti inonhuwira. Kwete pasina chikonzero, nokuti ichi ndicho chinodhura chinodhura munyika. Inowanikwa kubva pamaruva omuti "Crocus Sativus". Tsvimbo nhatu dzesitampu chete dzinogona kukohwa puva rimwe nerimwe.
Saffron - Nyika Yose Inodhura Zvipfeko uye Mishonga
Nekukohwa kwekiti imwe yefaroni, kusvika kune 200.000 michero inodiwa.
Inonhuwira inodhura zvikuru munyika - yakawanikwa kubva kuCrocus sativus
Sezvo micheka isingakwanisi kukohwa nemichina, pano inotyisa basa rebhuku rinoziviswa. Ichi ndicho chikonzero chekukosha kwezvinonhuwira izvi.
Saffron yakanga yatototaurwa nezvinyorwa zvechiGiriki. Nhoroondo yacho ndeyekuti Zeus akarara pamubhedha wepfuma iyi. Nhoroondo dzakawanda dzinopoteredza mambo wezvinonhuwira, asi kuporesa kwavo zvinonyatsozivikanwa uye vanokoshesa.
Kukurima nzvimbo uye kugoverwa kwefafa
Zvinotendwa kuti zvinonhuwira zvekare zveKrete zvakapararira munyika yose. Izwi rakachengeteka maererano nenyika yakabva hazvizivikanwi. Sezvo mbeu dzakashata dzichida mamiriro ekunze akasiyana-siyana, safoni haigoni kukura kupi zvako munyika.
Nhasi nzvimbo dzinonyanya kukura dziri kuIran. India uye Girisi ndiyo imwe saroni huru inobudisa nzvimbo. Kusvikira zvishoma zvishoma, zvinonhuwira zvinokurudzirwa kuMorocco neSpain. Izvo zviyero apa zvishoma nezviduku zve 1,3 tani pagore. Central Europe inogonawo kuzvirumbidza nzvimbo dzayo dzinokura. Semuenzaniso, safironi yeWachauer nesafrononi yepannonian inokurudzirwa muAustria. Kunyanya kunakidza musha muduku weMund muSwitzerland. Pano, iyi inonhuwira inokosha inokura pane imwe nzvimbo ye 2.500 square mita. Apo kukohwa kuri kuonekwa, musha wose unoungana pamwe chete kuzotora.
Chimiro chinonzi kunoporesa masimba, aive muGreece yekare se simba rinotsigirwa. Kare kare zvakataurwa kuti safironi yakachengeterwa chete vamwari nemadzimambo. Vakanga vakapfeka nguo dzakashongedzwa nesafroni.
Iyo spice inoonekwa sehemostatic, revitalizing uye kusimbisa mitsipa. Mifananidzo yematema inoshandiswa mumutauro weChinese mushonga (TCM), asiwo mune naturopathy yeimba. Mukuwedzera, safironi inonzi inoshamisa chishamiso. Perfume inogona kugadzirwa kubva kutambo dzinoputika nekuwedzera kwezvimwe zvinonhuwira uye zvinonhuwira.
Miti yacho inokosha sechinhu chinonhuwira nokuda kwekacheka kake kaviri. Rinoshandiswa zvishoma, rinopa zvokudya zvakanakira uye ruvara rutsvuku.
Zvinonhuwira - Musha wemahara kana uchibika
Turmeric | Zvinonhuwira zvokudya
Gadzira mishonga yebindu | Garden garden spices
Kudya panguva yekurasikirwa | udye